Ruzivo rwekushanyira Châteaux yeiyo Loire kubva kuParis | Kufamba Nhau
Ruzivo rwekushanyira dzimba dzeLoire kubva kuParis
Ini handisi mumwe weavo vanhu vanonyoresa kushanya kwese kana kutungamira kunovapo, asi ndinoziva kana zvakakodzera. Dzimwe nguva zvinowedzera kufamba kuronga zvese kana zvakadhura uye nekukurumidza kusaina rwendo rwakarongeka uko iwe kwausingafanire kuita zvakawanda kupfuura kuteerera, tarisa uye kunakirwa ndiko kuri nyore kwazvo.
Izvo zvakaitika kwandiri muParis. Ndakagara kwemazuva gumi nemaviri uye ndaive neshamwari, asi hapana ane mota uye zvese nemabasa avo. Ini ndaida kuziva nhare dzeLouvre uye ndaiziva kuti hongu kana hongu kwaive rwendo nemotokari saka kunyangwe nekusahadzika ndakasvika kuhofisi ye France Kuratidzwa munzvimbo yeName Dame kuti undizivise. Mushure mekufunga nezvazvo zvishoma, ndakaita kunotenga imomo ndikaronga zvese kuitira mangwana kuti ndibve kuParis mangwanani-ngwanani ku tsvaga zvimwe zveChâteaux yeRoire. Ichi ndicho chiitiko changu:
1 Kutarisa kwekuona kweChâteaux yeLoire
2 Chenonceau Castle
3 Cheverney Castle
5 Kufamba kwenzvimbo dzekuLoire
Kutarisa kwekuona kweChâteaux yeLoire
Sangano rakandipa nzendo mbiri nedzimba idzi senzvimbo yekuenda, iyo Nhare dzeRoire Day Rwendo and the MaCastle eRoire neMinibus. Yekutanga ine mutengo we115 euros uye yechipiri ye160 euros. Ndakasarudzira yekutanga uye yakakosha kunyangwe paine mukana wekuita mhando ye Upgrade uye kuverenga masikati. Ini handikurudzire uye ini ndichakuudza kuti sei.
Rwendo urwu runobuda mazuva ese evhiki pa makombi ane mhepo yekuchinjisa uye kugona kwevanhu vasere. Nzvimbo yemusangano ihofisi yesangano iri pamberi peLouvre na7: 15 mangwanani. Inotora maawa gumi nemaviri ese uye uverenge kuti unozodzoka pakati pe7 ne8 masikati. Kudzoka kwacho kunononoka zvishoma nekuda kwetraffic iyo Paris yaive nayo panguva iyoyo. Mutengo wekushanya, 115 euros, inosanganisira mukova wenhare nhatu dzinoshanyirwa.
Kutaura nezvazvo, ndeapi masvingo? Kwete iyo yakanakisa, inofanirwa kutaurwa. Zvayo ndezve Château Chenonceau, Château Cheverny uye Château Chambord, nenzira iyoyo. Ivo vanoonekwa mienzaniso yekuvandudzwa kwekuvakwa muFrance. Uri munzira iwe unopfuura nemumisha yakawanda inoyevedza uye uwane dzimwe dzimba asi unogona kudziwona kubva mumotokari. Ichokwadi ndechekuti kune mamwe mamwe macastle akanaka uye zvinonyadzisa kuti vari kunze kwekushanya. Ndokusaka zviri nani kuve nemota.
Inotorwa sechidimbu cheunyanzvi hwekushongedza kweRenaissance muFrance. Inozivikanwa nezita rekuti Nhare yeMadzimai nekuti yaigara inogarwa nevakadzi. Vakadzi vashanu vakapinda mukushongedzwa kwemukati mayo kusvika padanho rekuti vaive madzishe uye madzimai. Ndiro randaifarira zvakanyanya nekuti raitova nedzimwe nzvimbo dzemoto uye raidziya mukati. Minda yakanaka, iyo yakanakisa mbiri gallery pamusoro porwizi, makicheni ane midziyo yemhangura nemidziyo, maruva emaruva, machira, makamuri akavezwa ...
Ini ndaida imba iyi nekuti haina kukoshesa uye iine iwo madhata, mavhasi ane maruva, kapeti, mwoto moto, inokubvumira kufungidzira hupenyu pano. Ndinofanira kutaura kuti muperekedzi anokuzivisa iwe kuimba yemauto, nhoroondo yayo uye ruzivo rwekuvaka, kubva mumotokari, paunenge uchifamba, uye kuti kana achinge aripo anokutendera kuti ufambe wega uye iwe unoronga nguva nenzvimbo yekusangana. Kana iwe ukava shamwari nemumwe munhu, iwe unofamba uri muboka, zvikasadaro iwe unozviita wega pasina mutambo.
Iyi ndiyo nhare yandaifarira zvishoma uye pamwe nekuti Iyo haina kana kutaridzika kunge nhare. Iyo yakawanda yeimba yekugara iyo ichiri mumaoko emhuri yemakore-zana, iyo Vibraye. Imba yacho yakavhurika kune veruzhinji uye kune rwomukati rwendo rwausingakwanise kubuda mariri izvo zvinokutora iwe kuti uzive makamuri emaoko, dzimba dzekudyira, dzimba dzekurara uye yakanaka chapel. Kune matafura akagadzirirwa kudya nekunwa tii, iwe uchaona yekurara yevagari vemo uye zvese zvakajairika zvemhuri inokudzwa.
Mazana mazhinji ezana ramakore rechiXNUMX fanicha. Iwe unogona zvakare kubuda uye kufamba mubindu, rakanaka, uye kune hombe kennel panogara imbwa dzekuvhima dzemhuri inoyevedza yeFrance. Asi chokwadi ndechekuti, dai chisina kuiswa mukushanya, ndingadai ndisina kubhadhara kuti ndione. Chimwe chinhu ndechekuti iwe kana uchida comic book hunhu, Tintin. Kwaive kufemerwa kweMoulinsart Castle yakagadzirwa naHergé. Asi hapana chimwe chinhu.
Ini ndinofunga zvakanaka kupedzisa rwendo neichi chinonakidza chidimbu Nhare huru isina chinhu iyo hombe uye inokudzwa kupfuura dzimwe dzimba dzese dzeLoire. Yakavakwa kuwedzera ivhu rekuvhima raMambo Francisco I asi pamakore ake makumi matatu nemaviri ekutonga monarch aingotenderera pano… mazuva makumi mana! Akawanda castle pasina. Iri basa rinotyisa rine 355 chimneys, 440 makamuri, 14 masitepisi uye 800 turrets. Uye iwe unogona kufamba unenge pese pese.
Chambord rinenge risina chinhu. Kune mashoma chete makamuri ekugara akashongedzwa nenhambo yemidziyo, yekurara, semuenzaniso, asi kwete zvimwe zvakawanda. Kukwezva kukuru ndeye yemukati mairi helix masitepisi anotendwa kuti akagadzirwa naLeonardo Da Vinci. Kunyange vanhu vachikwira, vanhu vanodzika uye havamboyambuka Akanaka kwazvo. Zvakanakisisa pane zvese, iwe unogona kufamba pamusoro pematenga edzimba uye kufungisisa nharaunda dzakapoteredzwa uye iyo yakasara yeimba yacho pachayo.
Kukura kwayo kunomanikidza, kunyangwe kana isina chinhu. Kugona kubata matombo, mikova yematanda ine hofori F's zvichireva mambo, ini handizive, inzvimbo yakanaka nenzira yayo.
Kufamba kwenzvimbo dzekuLoire
Ndakataura pakutanga kuti unogona kugadzira Upgrade uye kuhaya basa rekudya kwemasikati, asi zvaive zvisina kukodzera. Iyo masikati ari kuChâteau Chenonceau kuma 11 am. Kune zvimwe zvivakwa zvechipiri uye kune imba yekudyira iyo inopa mamenu maviri, iyo Découverte nePrestige. Handisi kuti hazvina kukosha nekunaka kwechikafu asi kwenguva yaunotambisa. Iwe unofanirwa kuve uri pa11 uye kurasikirwa nemaawa maviri uchidya ... ini handizive, kwandiri zvinoita kunge zvisina basa kwandiri.
Mumatare edzimba mune cafeteria uye iwe unogona kutenga chimwe chinhu chekunwa uye kudya ipapo. Kunyangwe iwe uri wekuona kure, iwe unogona kutakura masangweji mubhegi rako uye kudya pane minibus. Mutyairi anodonha iwe. Pakupedzisira izvi Haisi iyo yega yekushanya kuburikidza nedzimba dzakapihwa nesangano rekushanyirwa asi ndiyo yakachipa. Kune iyo 160 euro iyo yakafanana chaizvo uye iyo 269 euro inova yekushanya yakazvimirira iyo inokutora iwe kwese kwaunenge uri muParis, haufanire kuenda kune iyo agency, uye inosanganisira masikati ku Chenonceau.
Idzo ndidzo nhare dzakafanana, ndosaka ndichiti haina kukosha nyatso kubhadhara zvakanyanya. Muchidimbu, aya maratidziro isarudzo dzekushanya kubva kuParis uye uwane dzimwe dzimba dzeRoire Valley. Pane imwe nguva pakanga paine dzimba mazana matatu asi mushure meFrance Revolution vazhinji vakarwiswa vakapiswa uye havana kuzombopora. Kana iwe uine mukana wekurenda mota uye uchizviita wega, zvirinani, asi kana zvisiri kushanya uku hakuna kushata zvachose.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » Getaways Europe » France » Ruzivo rwekushanyira dzimba dzeLoire kubva kuParis